नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको महत्व «
नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको ठूलो महत्व र हिस्सा छ । धानको उत्पादन घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा असर पर्छ भने उत्पादन बढ्दा जीडीपी माथि उक्लन्छ । धानको उत्पादन बढेकाले यस वर्ष किसान खुसी छन् तर मंसिर मसान्तसम्म कुनै प्राकृतिक प्रकोप भएन भने राज्यको आम्दानी बढ्ने निश्चित प्रायः छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष १० प्रतिशतले रोपाइँ बढी भएको छ । गत वर्ष ८३.९७ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको थियो भने यस वर्ष ९२.२५ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ ।
यस वर्ष नेपालमा जेठ ३१ देखि मनसुन सुरु भएको थियो । त्यसअघिको ‘प्रि–मनसुन’ले चैते धानलाई फाइदा पु¥याएको थियो । पर्याप्त वर्षाका कारण टारटुक्रा जमिनमा समेत सिँचाइ भएकाले उत्पादनमा बढोत्तरी हुने भएको हो । नेपालमा सन् १९७० मा २३ करोड, सन् १९८० मा २४ करोड ६० लाख, सन् १९९० मा ३० करोड ५० लाख, सन् २००० मा ४० करोड २२ लाख र सन् २०१० मा ४० करोड २ लाख केजी धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष झन्डै ५ मिलियन टन अर्थात् ५० करोड केजी धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । सरदर प्रतिकेजी रु. ४५ का दरले हिसाब गर्दा उक्त धानबाट यस वर्ष रु. २२ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि गणना २०६८ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो । गत वर्ष नेपालले लगभग रु. २४ अर्बको चामल आयात गरेको थियो । नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती हुदै आएको छ । आव ०६०/६१ देखि ०७४/७५ सम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा धानको उत्पादन बढ्नु र घट्नुमा मौसमै निर्भर भएको देखिन्छ । जुन वर्ष मौसम अनुकूल हुन्छ त्यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको र मौसम प्रतिकूल भएका बखत उत्पादन घटेको देखिन्छ । नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । एक हेक्टर जमिन भनेको २० रोपनी हो ।
नेपालमा ०६०/६१ देखि ०७४/७५ अर्थात् १५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै धानखेती भएको आव ०६०/६१ हो । सो वर्ष १५ लाख ५९ हजार ४ सय ३६ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएकोमा ४४ लाख ५५ हजार ७ सय ७२ मेट्रिक टन धान फलेको थियो । त्यसैगरी यहाँ सबैभन्दा कम ११ वर्ष पछि ०७२/७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९ सय ८ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकामा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । १५ वर्षको सेरोफेरोभित्रमा सबैभन्दा धेरै धान फलेको वर्ष ०७३/७४ साल हो । उक्त वर्ष ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालको कुल जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेतीमध्ये लगभग ५० प्रतिशतमा धान खेती हुन्छ । सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कनुसार ६० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । धान रोपाइँ हुने असार–साउन महिनामा वर्षा भएन भने सिफारिश भए जति क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन सक्दैन ।
प्रत्येक वर्ष धानखेती गर्ने जमिन घटिरहेको छ । ०६०/६१ मा १५ लाख ५९ हजार ४ सय ३६ हेक्टरमा धानखेती भएकामा १५ वर्षपछि (०७४/७५) मा १४ लाख ६९ हजार ५ सय ४५ हेक्टरमा सीमित हुन पुग्यो । संसारका आधा जनसंख्याको मुख्य खाना भात हो । एसियाली देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादन हुनाका साथै खपत पनि हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै धान फल्ने देश चीन हो । विश्वका ७८ भन्दा बढी देशमा ८ सय ६४ थरीका धानका बीउ सिफारिश भएका छन् । नेपालमा ८६ उन्नत र सात रैथाने जातको बीउबाट उत्पादन गरिँदै आएको छ । आगामी पाँच वर्षमा अर्थात् वि.सं ०७८/७९ मा नेपालले १ करोड ४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नुपर्छ ।